Fironana sy faminaniana nomerika | Martech Zone
Ny fitandremana nataon'ny orinasa nandritra ny areti-mandringana dia nanelingelina ny fizotry ny famatsiana, ny fividianana ny fividianana ny mpanjifa, ary ny ezaka ara-barotra nifandraika taminay tato anatin'ny roa taona.
Raha ny hevitro, ny fiovana lehibe indrindra amin'ny mpanjifa sy ny orinasa dia nitranga tamin'ny fiantsenana an-tserasera, fandefasana trano, ary fandoavam-bola amin'ny finday. Ho an'ireo mpivarotra dia nahita fiovana lehibe teo amin'ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny teknolojia marketing nomerika izahay. Manohy manao zavatra bebe kokoa isika, manerana ny fantsona sy ny mpanelanelana bebe kokoa, tsy dia misy mpiasa - mitaky anay hiantehitra be amin'ny haitao handrefesana, handrefesana ary hanovana nomerika ny fikambananay. Ny fifantohan'ny fanovana dia ny automatisie anatiny sy ny traikefan'ny mpanjifa ivelany. Ireo orinasa afaka nanangona sy nampifanaraka haingana dia nahita ny fitomboan'ny tsena. Ireo orinasa izay mbola tsy manana dia mbola miady mafy hamerina ny anjaran'ny tsena very.
Famongorana ireo fironana fivarotana nomerika amin'ny taona 2020
Ny ekipa ao amin'ny M2 On Hold dia nandatsaka ny angon-drakitra ary namorona infographic izay mifantoka amin'ny fironana miavaka 9.
Ny varotra nomerika dia mivoatra tsy tapaka satria izy io dia iray amin'ireo indostrialy haingana indrindra manerantany. Na eo aza izany dia mipoitra ny fironana lohateny ary mampiseho amintsika ny hery lehibe mitondra ny tsena. Ity bilaogy ity dia mamerina ny vinavinan'ny fironana amin'ny taona 2020 miaraka amin'ny torolàlana momba ny infographic. Ankoatry ny antontan'isa sy ny zava-misy dia andao jerena ireo fironana sivy tao anatin'ny 12 volana lasa niampita sehatra, teknolojia, varotra ary famokarana atiny.
M2 On Hold, fironana marketing dizitaly 9 amin'ny 2020
Chatbots Powered AI - Tetikasa Gartner hampiasa ny 85% -n'ny fifandraisan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ny chatbots ary ny mpanjifa dia mizatra tsara, mankasitraka ny serivisy 24/7, valiny eo noho eo ary ny fahamarinan'ny valiny tsotra amin'ny fanontaniana. Ampiako ihany fa ny orinasa be pitsiny dia mandray chatbots izay mamindra tsara ny resaka amin'ny olona mety ao anatiny mba hanala ny fahasosorana amin'ny zavatra niainany.
Personalization - Lasa ny andron'ny Ry malala %% anarana voalohany %%. Ny sehatra mailaka sy fandefasan-kafatra maoderina dia manome automatique izay misy fizarana, atiny azo vinavina miorina amin'ny angona momba ny fitondran-tena sy ny demografika, ary ny fampidirana ny faharanitan-tsaina artifisialy hizaha toetra sy hanatsara ny hafatra mandeha ho azy. Raha mbola mampiasa marketing andiany iray sy be dia be ianao, dia tsy mahazo mitarika sy mivarotra!
ECommerce teratany amin'ny media sosialy - (Fantatra koa amin'ny hoe Varotra ara-tsosialy or Fiantsenana zanatany) Ny mpanjifa dia mila traikefa tsy misy tohiny ary mamaly amin'ny dolara rehefa tsy mandeha ny fantsom-panovana. Saika ny sehatra media sosialy rehetra (farany teo TikTok) dia mampifandray ireo sehatra ecommerce amin'ny fahaizany mizara ara-tsosialy, ahafahan'ny mpivarotra mivarotra mivantana amin'ny mpijery amin'ny alàlan'ny sehatra sosialy sy horonan-tsary.
Mandeha manerantany ny GDPR - Aostralia, Brezila, Kanada ary Japon dia efa nandany ny lalàna momba ny tsiambaratelo sy ny angon-drakitra hanampiana ireo mpanjifa amin'ny mangarahara sy ny fahazoana miaro ny angona manokana momba azy ireo. Tao Etazonia, nandalo ny Lalàna momba ny fiainana manokana any California (CCPA) tamin'ny taona 2018. Ny orinasa dia tsy maintsy nanamboatra sy nampiasa fiarovana feno, arisiva, mangarahara ary fanaraha-maso fanampiny amin'ny sehatra an-tserasera ho setrin'izany.
Voice Voice - Ny fikarohana amin'ny feo dia mety mitaky ny antsasaky ny fikarohana an-tserasera ary ny fikarohana amin'ny feo dia nitarina avy amin'ny fitaovantsika finday ka hatrany amin'ny mpandahateny, fahitalavitra, bara ary fitaovana hafa. Ireo mpanampy virtoaly dia mihamarina hatrany hatrany amin'ny valiny misy ny toerana misy azy manokana. Izany dia fanerena ireo orinasa hitandrina tsara ny atiny, handamina izany ary hizara izany na aiza na aiza no idiran'ireo rafitra ireo.
Horonantsary lava endrika - Mandritra ny fotoana fohy ny fifantohana dia angano tsy mitombina izay mety nandratra mpivarotra tokoa nandritra ny taona maro. Na izaho aza dia nianjera tamin'io, nandrisika ny mpanjifa hiasa amin'ny fampitomboana matetika ny sombim-baovao. Manoro hevitra ny mpanjifako aho izao mba hamolavola tsara ireo tranomboky atiny izay voalamina tsara, feno ary manome ny antsipiriany rehetra ilaina hampahafantarana ireo mpividy. Tsy misy hafa amin'izany ny horonan-tsary, miaraka amin'ireo mpanjifa sy mpividy orinasa mihinana horonantsary mihoatra ny 20 minitra ny halavany!
Marketing amin'ny alàlan'ny fampiharana hafatra - Satria mifandray foana isika, ny fandefasan-kafatra amin'ny hafatra mifandraika amin'ny fotoana mety dia mety hampisy fifandonana. Na rindranasa finday, fampandrenesana momba ny browser na fampandrenesana ao amin'ny tranokala… nandraisan-kafatra fandefasan-kafatra ho mpanelanelana amin'ny fifandraisana amin'ny tena izy.
Zava-misy mitombo sy zava-misy virtoaly - AR & VR ampidirina amina fampiharana finday sy traikefa ho an'ny mpanjifa feno. Na tontolo virtoaly ihaonananao ny mpanjifanao manaraka na hijeranao miaraka amin'ny horonan-tsary… na fampiharana finday hahitana hoe hanao ahoana ny fisehon'ny fanaka vaovao ao amin'ny efitranonao, ny orinasa dia manangana fanandramana miavaka misy eo am-pelatanantsika.
Fahaizana artifisialy - AI ary ny fianarana ny milina dia manampy ny mpivarotra hamily, hanaingo ary hanatsara ny fahaizan'ny mpanjifa tsy mbola nisy toy izany. Ireo mpanjifa sy orinasa dia miha reraka amin'ireo hafatra an'arivony an'arivony izay manosika azy ireo isan'andro. AI dia afaka manampy antsika handefa hafatra mahery vaika sy mahasarika kokoa rehefa misy akony lehibe izany.
Ao amin'ny infographic etsy ambany, tadiavo ireo fironana lohateny sivy tamin'ny taona 2020. Ity torolàlana ity dia manala tsy mahomby ny fiantraikan'ireo fironana ireo eo amin'ny tsena sy ny fahafaha-mitombo asehony ankehitriny.
Tags: aiahy chatbotsfahaizana artifisialychatbotsfironana marketing amin'ny atinyfironana marketing amin'ny mailakaFacebookSary torohayfironana amin'ny automatisation marketingfironana marketingfironana findayfiantsenana zanatanyNy fanodinana fiteny voajanaharynlppersonalizationpersonalizationPinteresttoerana2mialohapersonalization mialohasegmentationsnapchatvarotra sosialyhaino aman-jery sosialyfironana amin'ny haino aman-jery sosialyTikTok
Ecamm Live: Rindrambaiko tsy maintsy ananana isaky ny streamer mivantana
Jan 17, 2014 ao amin'ny 7: 38 AM
Tsy isalasalana fa loharanon-kevitra lehibe amin'ny infografika mahagaga ny blôginao. Ary koa, ny lahatsoratra tsirairay ao amin'ny blôginao dia nosoratana matihanina sy voaforona tsara.
Misaotra nizara infografika mahay!
Janoary 20, 2014 amin'ny 11:36 PM
Douglas Karr ! Fizarana tena mampahafantatra. Nandefitra tamin'ny famolavolana mahasoa, hevitra ianao. Misaotra betsaka indray
12 Feb 2014 tamin'ny 7:35 maraina
Ny taom-baovao dia mitondra miaraka aminy, fahafaha-manao goavana ary tontolo an-tserasera izay mihasarotra isan'andro. Miova tsy tapaka ny indostria, fa izany no tena mampientanentana azy.
12 Feb 2014 tamin'ny 7:44 maraina
Eny, ny zava-misy dia Isan-taona aho dia miezaka mampifanaraka ny eritreritro voalazako momba ny zavatra hanintona
ary manan-danja amin'ny paoma amin'ny fandraharahana fandaharam-potoana sy ny ecommerce ho an'ny taona
Mar 21, 2014 amin'ny 8: 00 AM
Tena lahatsoratra tena mampahafantatra. Tena lahatsoratra mahafinaritra ity. Nanampy fampahalalana be dia be tao amin'ny blôginao ianao. Misaotra nizara ity vaovao sarobidy ity. Tena manampy sy mampianatra koa.
Jul 30, 2014 amin'ny 7: 23 AM
Salama Douglas, nahafinaritra ny torohevitra. Tohizo ny fandefasana.
3 Aogositra 2014 à 1:02
Douglas Infographic mahafinaritra sy mahasoa! Ankehitriny dia fantatro fa saika mpanapa-kevitra amin'ny orinasa manerantany dia aleony mampiasa media sosialy amin'ny asa rehetra ataony. Misaotra ny fizarana!
7 Novambra 2020 à 10:52
Mahafinaritra ny torohevitra. Tohizo ny fandefasana
7 Novambra 2020 à 10:53
Aug 25, 2021 amin'ny 6: 48 AM
mbola mandaitra ve ity votoaty ity amin'ny 2021?
25 Aogositra 2021 à 12:21
Salama John, heveriko fa ny fironana amin'ny 2014 dia tena mahazatra amin'izao fotoana izao, atosiky ny olona miasa an-trano sy miantsena amin'ny fitaovany finday.
Nandrisika ahy hanavao ity lahatsoratra ity ianao amin'ny 2021 miaraka amin'ny infografika tsara sy antsipiriany avy amin'ny M2 On Hold.
3 Novambra 2021 à 6:29
tena tsara sy malina tompoko. misaotra betsaka… manantena ny hianatra bebe kokoa avy aminao